(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 28/08/2020)
Italy yenye ethandwa kakhulu izindawo izivakashi emhlabeni. Abantu umhlambi lizwe ukutya fantastic, isiko, yaye ubutyebi bembali. Inyaniso, akunalo ukuba atyelele kwizixeko ezinkulu ukuba ugonane Italy. Umzekelo omhle woku elula izivamvo Riviera Italian yaziwa njenge Cinque Terre. Yi indawo ethandwa ngokuba abantu bafuna ukonwabela lweMeditera kunxweme kwaye kususa nesantya uxinzelelo lobomi lwangoku. Nangona kukho ezininzi kwiidolophu bodwa needolophana kwi emideni Italy, kwiidolophu Cinque Terre kusetyenziswa kude ethandwa kakhulu. Ngenxa umdla kule indawo kumnandi, Gcina A Isitimela idibanise isikhokelo esikhawulezayo sendlela yokubona uCinque Terre ngoLoliwe.
Ezi oololiwe azikho nje rhoqo njengoko kulindelwe kunikwa umgama elifutshane phakathi kwiindawo. Baya kudla ukusebenza kanye iyure yonke, kodwa oku kuyohluka amaxesha ngamaxesha. kunjalo, kusoloko kungcono ukucela ulwazi olongezelelweyo xa bethenga itikiti lakho. Ukongezelela ukwazi ishedyuli kunye zokuhamba ngexesha le umzila kaloliwe, kubalulekile ukuba uqinisekise amatikiti yakho. Kukho oomatshini Ukuqinisekiswa kumaqonga ngololiwe ukuba ungasebenzisa. Konke kufuneka ukwenze uslayide isiphelo imxinwa itikiti waya slot of umatshini encinane mthubi, ulindele ukuva isitampu.
Riomaggiore eya kuba angayeka yokuqala (ukuba uyaphi e La Spezia) okanye angayeka yesihlanu (ukuba uyaphi ukusuka Levanto). kunjalo, ibizwa cishe uza ukuba angayeka yokuqala iindwendwe ezininzi Cinque Terre, kuba yindlela fastest ukuya khona. Riomaggiore yeyona inkulu nemizana amahlanu, kwaye likomkhulu ongamiselwanga ukususela kwi-ofisi ephambili park ikhona. Izakhiwo ngcu bonke phezu kumwonyo eweni, yonke indlela eya kwizibuko ezincane. Imeko, exwebula izindlu Shiny yinto entle yaye uya kuhlala kwinkumbulo yakho ngonaphakade. It is a emehlweni fantastic ukubona ukutshona kwelanga, kwaye kufuneka abone ukuba izibini ukuba ufuna ukwabelana umzuzu ekhethekileyo.
Ngalinye iilali ezintlanu elinomtsalane yayo ethile. Corniglia ngokhethekileyo ekubeni kwi chibi. kunjalo, into awunazo ku kumanxweme, ngaphezu yenza ngenxa ngobuhle engaqhelekanga. ICorniglia ivakalelwa kukuba ikude kakhulu kune ezinye iilali. kunjalo, inikeza sonwabile kwaye bendawo. Le lali isoloko ngoyaba ngenxa ezindle- yayo olunzima. Ngokungafaniyo nezinye zemizana linokufikeleleka ngesikhephe, Corniglia eliphezu kweenduli kwaye akukho ukungena elwandle. Ekuphela kwendlela yokufikelela kumnandi ukuhamba indlela Cinque Terre okanye ukuthatha uloliwe. kunjalo, ke kubalulekile ukuqaphela ukuba uloliwe kuba nanceba kuwe yonke imizamo emzimbeni. Kuya kufuneka uhambe izinyuko ezithile ukufikelela kwiziko leelali kwaye ubone yonke into enikwa yile lali incinci.
Corniglia abe nembono fantastic okuvumela ubona uninzi akake kunye ulwandlekazi. I-Belvedere kule lali yindawo enkulu ukuya uthabathe kuzo ubuhle Cinque Terre. Wakuba wenze ukuba unako ntlobo linikeza kwilali, ukusuka pesto emangalisayo iwayini emnandi. Corniglia has a ubutyebi bembali yokwenza iwayini, kwaye ukuba zanele lucky ukuba azakhele bakule, u nga ukungcamla yaye bafunde iwayini yabo.
Vernazza ithathwa njengenye iilali ezininzi ezintle nje kuphela Cinque Terre, kodwa lonke ilizwe Italy. Kuba ngokuqinisekileyo yeyona ndawo evelele Cinque Terre eyenza abaninzi ukuwa uwathanda uhambo. Kuye ukuva ebukekayo ngakumbi kwaye yemveli ukuba omnye iilali azinayo. Dibanisa ukuba ngokutya ezizodwa kunye izinto ezimangalisayo, kwaye ufumana indawo eliqinisekisa utyelelo yesibini. Qinisekisa ukuba atyelele Doria nqaba xa Vernazza. Iqulathe enye iinqaba yokugqibela sokuqala esikhusela abantu belali eminyaka eyadlulayo.
Monterosso al Mare Akuthandabuzeki touristy kakhulu kwaye iiholide ezifana dolophu kwi Cinque Terre. It has iimoto, iihotele kunye namanxweme ingqalutye egqibeleleyo abakhenkethi. Ukuba ufuna ukutyelela le nxalenye imangalisayo of Italy, kodwa zikhetha vibe mihla, ke Monterosso ukuba wena. Monterosso sele ngaselwandle Ogqibeleleyo ukuba strolls ngokuhlwa, ngisho ngcono, baye okudlela omhle kwenza nabani kunandipha kwaselwandle.
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “Guide Quick: Indlela To Travel Cinque Terre By Train” kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/guide-travel-cinque-terre-train/ – (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)